Facebook ပေါ်မှ ဖက်ရှင်လျှောက်လမ်းပေါ်အထိတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ Kate Grant
9 Aug 2018 . 5:36 PM
မြောက် Ireland မှ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ဒေါင်းရောဂါလက္ခဏာရှိတဲ့ မိန်းမပျိုလေးတစ်ဦးဟာ Belfast Fashion Week ရဲ့ လျှောက်လမ်းထက်မှာ ပွဲဦးထွက်လျှောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ပွဲဦးထွက်လျှောက်လှမ်းခွင့်ရခဲ့တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မိန်းမပျိုလေးကတော့ မြောက် Ireland နိုင်ငံ County Tyrone မြို့မှာ နေထိုင်တဲ့ Kate Grant ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့မိခင် Deirdre ဟာ Facebook ပေါ်မှာ သူမရဲ့အကြောင်းနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို တင်ပေးရာမှစပြီး ပရိသတ်တွေ သတိထားမိကာ နာမည်ကြီးလာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Deirdre ဟာ သူမသမီးဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Facebook မှာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာတော့ Kate ဟာ ဒေါင်းရောဂါလက္ခဏာရှိပေမယ့်လည်း ဖက်ရှင်နယ်ပယ်မှာ ထွန်းလင်းတောက်ပတဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်ချင်ခဲ့ပြီး သူမတို့လိုလူမျိုးတွေအတွက် စံပြပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ချင်ခဲ့ကာ စစ်မှန်တဲ့ အလှတရားကို ရဲဝံ့စွာ ထုတ်ဖော်ပြသချင်ခဲ့သူပါ။ ဒါကြောင့်မို့ သူမကို သာမန်မိန်းကလေးတွေလို မြင်ပေးပြီး ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းအားဖြင့် သူမရဲ့အိပ်မက်တွေ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာအောင် ကူညီပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံထားတာက တွေ့ရပါတယ်။
Deirdre Grant Post
ရက်ပေါင်းအနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာ အဲလိုရေးသားတင်ခဲ့တဲ့ Post ကို Facebook အသုံးပြုသူတွေကို မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် Like တွေ Share တွေ အမြောက်အမြား ပြုလုပ်ပြီး ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
သူမအမေထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့တာကတော့ “Kate လို ဒေါင်းရောဂါလက္ခဏာရှိတဲ့ ကလေးမျိုးတွေနဲ့ မသန်မစွမ်းကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ ရောဂါရှိတယ် သာမန်လူတွေလို ပြီးပြည့်စုံမှုမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ ကြောက်ရွံ့ပြီး အိမ်မှာပုန်းနေတာမျိုး မပြုလုပ်ဘဲ ကိုယ်အိမ်မက်တွေကို ရဲရဲဝံဝံလူရှေ့ချပြကာ အောင်မြင်မှုကို ဆွတ်ခူးလိုက်ကြပါဆိုပြီး” အားပေးစကား ပြောကြားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
၁၉ နှစ်အရွယ် Kate ကတော့ New York Fashion Week မှာ လျှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့ ဒေါင်းရောဂါလက္ခဏာပိုင်ရှင် Australian Model တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Madeline Stuart ကို သူမရဲ့ စံပြမော်ဒယ်အဖြစ် ထားကာ ခွန်အားယူခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
BBC ရဲ့Talkback Programme တစ်ခုမှာ သူမက အခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သူမပြောကြားခဲ့တာကတော့ ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ ဖက်ရှင်မော်ဒယ်လ်အဖြစ်နဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ နေရာတိုင်းမှာ သူမမှ သူမဆိုပြီး သည်းသည်းလှုပ် ချစ်ခင်ခံရသူမျုိုး ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ သူမအတွက်တော့ အိမ်မက်တွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပုံပေါ်လာပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Facebook မှာ နာမည်ကြီးလာတဲ့ သူမကို မော်ဒယ်လ်အေဂျင်စီတစ်ခုကနေ Belfast Fashion Week မှာ လျှောက်လှမ်းဖို့ ကမ်းလှမ်းခြင်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
သာမန်လူသားတွေလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဒေါင်းရောဂါလက္ခဏာရှိသူလေးဖြစ်သော်လည်း သူမရဲ့ပြင်းပြတဲ့ ဖြစ်ချင်စိတ်ကြောင့် အောင်မြင်မှုတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာကာ ဆွတ်ခူးခွင့် ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Belfast Fashion Week ကတော့ ၂၆ ရက်နေ့ အောက်တိုဘာလမှာ စတင်မှာဖြစ်ပြီး Kate ကိုတော့ ၂၇ ရက်နေ့ အောက်တိုဘာမှာ လျှောက်လမ်းထက် တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Facebook ပျေါမှ ဖကျရှငျလြှောကျလမျးပျေါအထိတကျရောကျလာနိုငျတဲ့ Kate Grant
မွောကျ Ireland မှ ဆယျကြျောသကျအရှယျ ဒေါငျးရောဂါလက်ခဏာရှိတဲ့ မိနျးမပြိုလေးတဈဦးဟာ Belfast Fashion Week ရဲ့ လြှောကျလမျးထကျမှာ ပှဲဦးထှကျလြှောကျလှမျးနိုငျခဲ့ပါပွီ။ ပှဲဦးထှကျလြှောကျလှမျးခှငျ့ရခဲ့တဲ့ ဆယျကြျောသကျအရှယျမိနျးမပြိုလေးကတော့ မွောကျ Ireland နိုငျငံ County Tyrone မွို့မှာ နထေိုငျတဲ့ Kate Grant ဆိုတဲ့ အမြိုးသမီးလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့မိခငျ Deirdre ဟာ Facebook ပျေါမှာ သူမရဲ့အကွောငျးနဲ့ဓာတျပုံတှကေို တငျပေးရာမှစပွီး ပရိသတျတှေ သတိထားမိကာ နာမညျကွီးလာရခွငျး ဖွဈပါတယျ။
Deirdre ဟာ သူမသမီးဖွဈခငျြတဲ့ အိပျမကျတှနေဲ့ပတျသကျပွီး Facebook မှာ ရေးသားဖျောပွခဲ့တာတော့ Kate ဟာ ဒေါငျးရောဂါလက်ခဏာရှိပမေယျ့လညျး ဖကျရှငျနယျပယျမှာ ထှနျးလငျးတောကျပတဲ့ ကွယျတဈပှငျ့ဖွဈခငျြခဲ့ပွီး သူမတို့လိုလူမြိုးတှအေတှကျ စံပွပုဂ်ဂိုလျလညျးဖွဈခငျြခဲ့ကာ စဈမှနျတဲ့ အလှတရားကို ရဲဝံ့စှာ ထုတျဖျောပွသခငျြခဲ့သူပါ။ ဒါကွောငျ့မို့ သူမကို သာမနျမိနျးကလေးတှလေို မွငျပေးပွီး ကူညီပံ့ပိုးပေးခွငျးအားဖွငျ့ သူမရဲ့အိပျမကျတှေ အမှနျတကယျဖွဈလာအောငျ ကူညီပေးကွပါလို့ မတ်ေတာရပျခံထားတာက တှရေ့ပါတယျ။
ရကျပေါငျးအနညျးငယျကွာတဲ့အခါမှာ အဲလိုရေးသားတငျခဲ့တဲ့ Post ကို Facebook အသုံးပွုသူတှကေို မယုံကွညျနိုငျလောကျအောငျ Like တှေ Share တှေ အမွောကျအမွား ပွုလုပျပွီး ဝိုငျးဝနျးပံ့ပိုးပေးခဲ့ကွတာကို တှရေ့ပါတယျ။
သူမအမထေပျလောငျးပွောကွားခဲ့တာကတော့ “Kate လို ဒေါငျးရောဂါလက်ခဏာရှိတဲ့ ကလေးမြိုးတှနေဲ့ မသနျမစှမျးကလေးငယျတှအေနနေဲ့ ရောဂါရှိတယျ သာမနျလူတှလေို ပွီးပွညျ့စုံမှုမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ ကွောကျရှံ့ပွီး အိမျမှာပုနျးနတောမြိုး မပွုလုပျဘဲ ကိုယျအိမျမကျတှကေို ရဲရဲဝံဝံလူရှခေ့ပြွကာ အောငျမွငျမှုကို ဆှတျခူးလိုကျကွပါဆိုပွီး” အားပေးစကား ပွောကွားထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။
၁၉ နှဈအရှယျ Kate ကတော့ New York Fashion Week မှာ လြှောကျလှမျးခဲ့တဲ့ ဒေါငျးရောဂါလက်ခဏာပိုငျရှငျ Australian Model တဈဦးဖွဈတဲ့ Madeline Stuart ကို သူမရဲ့ စံပွမျောဒယျအဖွဈ ထားကာ ခှနျအားယူခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။
BBC ရဲ့Talkback Programme တဈခုမှာ သူမက အခုလိုပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ သူမပွောကွားခဲ့တာကတော့ ထငျရှားကြျောကွားတဲ့ ဖကျရှငျမျောဒယျလျအဖွဈနဲ့ ကမ်ဘာကွီးရဲ့ နရောတိုငျးမှာ သူမမှ သူမဆိုပွီး သညျးသညျးလှုပျ ခဈြခငျခံရသူမြိုး ဖွဈခငျြပါတယျ။ အဲလိုဖွဈခငျြခဲ့တဲ့ သူမအတှကျတော့ အိမျမကျတှဟော တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ပုံပျေါလာပွီလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ Facebook မှာ နာမညျကွီးလာတဲ့ သူမကို မျောဒယျလျအဂေငျြစီတဈခုကနေ Belfast Fashion Week မှာ လြှောကျလှမျးဖို့ ကမျးလှမျးခွငျးခံရတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
သာမနျလူသားတှလေိုမြိုးမဟုတျဘဲ ဒေါငျးရောဂါလက်ခဏာရှိသူလေးဖွဈသျောလညျး သူမရဲ့ပွငျးပွတဲ့ ဖွဈခငျြစိတျကွောငျ့ အောငျမွငျမှုတှဟော တဖွညျးဖွညျးနီးကပျလာကာ ဆှတျခူးခှငျ့ ရရှိခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။ Belfast Fashion Week ကတော့ ၂၆ ရကျနေ့ အောကျတိုဘာလမှာ စတငျမှာဖွဈပွီး Kate ကိုတော့ ၂၇ ရကျနေ့ အောကျတိုဘာမှာ လြှောကျလမျးထကျ တှမွေ့ငျရမှာဖွဈပါတယျ။
by Moethae Say . 39 mins ago